Baarlamaanada Galmudug iyo HirShabelle oo go’aan ka qaatay shirkii Kismaayo - Caasimada Online
Home Warar Baarlamaanada Galmudug iyo HirShabelle oo go’aan ka qaatay shirkii Kismaayo
Baarlamaanada Galmudug iyo HirShabelle oo go’aan ka qaatay shirkii Kismaayo
Jowhar (Caasimadda Online) – Cali Gacal Casir Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo maanta ka hadlayay furitaanka kalfahiga 4aad ee Golaha Shacabka ayaa waxaa uu sheegay in shirkii dhawaan lagu soo gaba gabeeyay Magaalada Kismaayo uu yahay mid aan wax wadatashi ah laga sameyn.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxaa uu sheegay in shirkii Madaxda Maamul gobaleedyada uu yahay mid lagu kordhinayo dhibaatooyinka ka jira deegaanada galmudug,waxaa uuna shirkaasi ku tilmaamay mid ay ku riyoodeen.
Dhawaan ayay aheyd markii War murtiyeed ka soo baxay Madasha dawlad gobaleedyada Soomaaliya ay sheegeen in ay hakiyeen dhamaan wada shaqeyntii ay la lahayeen dawladda Faderaalka Soomaaliya.
”Warka ka soo baxay Shirkii Kismaayo waa mid lagu kordhinayo dhibaatooyinka ka jira Galmudug,waana mid aan waxba ka jirin oo riyo ah, Wixii ka soo baxay shirkaas leyskalama tashan mana na meteli karaan,waxana codsaneynaa in ilgaar ah lagu haayo
Dhinaca kale Guddoomiyaha Baarlamaanka Hir-Shabeelle Cusmaan Barre Maxamed aya isna waxa uu sheegay in dowladda iyo dowlad Goboleedyadu aysan aheyn kuwo kala maarma.
“Dowladdu waa jir, dowlad gobolleedyaduna waa xubin. Xubin iyo jirna kalama maarmaan.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo sirasia ah u furay kal-fadhiga 4aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.